सरकार आफ्नो भूमिका बढाऊ, स्याउमा लगानी गर :: Setopati
सरकार आफ्नो भूमिका बढाऊ, स्याउमा लगानी गर
आरू, ओखर, स्याउ, नास्पती, जुम्लाका फारम।
सन्चो छ कि, बिसन्चो छ, जिउ छ क्या आराम?...
भौगोलिक बनोट, रहनसहन, उत्पादन अनुसार नै सृजना हुन्छ साहित्य। जुम्लाको फलफूल उत्पादनसँग जोडिएको माथिको गीत खबर आदन प्रदान गर्न पनि उपायोगि हुँदै आईरहेको छ।
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान अन्तर्गत गोर्खाली सेनालाई तीनपटकसम्म अवरोध गरेको जुम्लाले अन्तिममा आत्मसमर्पणभन्दा आम्मत्यागलाई स्वीकार गरेको इतिहास छ।
उक्त राज्य विस्तार अभियानलाई अबरोध खडा गरेकै कारण लामो समय शासकीय दृष्टिबाट कर्णाली र जुम्ला निकै टाढा रहेको यहाँका जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि यो आजपर्यन्त कायम छ। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्वमा हारेका देशहरूलाई जितेका देशहरूले दबाए। यता सिंगो कर्णाली प्रतिरोधको चपेटामा पर्‍यो।
लामो समय जुम्लाले आफू एक छाक भोको रहेर पनि काली मार्सि चामल दरबारको लागि पठाईरहयो। हिजो जुम्ली कालि मार्सी खान निकै सौखिन थियो दरबार। आज सौखिन छन् व्यापारी र ठूला घरानाहरू।
जुम्ला आज आत्मनिर्भर हुने कोशिश गरिरहेछ। यहाँ आत्मनिर्भरताको मतलव कुनै पनि वस्तु आयात नगर्ने होइन। आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्ने गरी कमाउनु हो। यो आत्मनिर्भरताको जग हो फलफूल उत्पादन। अर्थात स्याउ उत्पादन।
लामो समय जुम्ला र फोहोर पर्यायवाची भनि संकथन निर्माण गरियो। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, जैविक विविधताको धनि, भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यताको केन्द्र, मध्यकालिन सिंजा साम्राज्यको गौरवपूर्ण विरासतको इतिहास, वौद्ध र हिन्दु धर्मको अनुपम् संगम, नेपाली भाषाको जननिका साथै वर्तमान र भविश्यको आशालाग्दो उज्यालो बोकेको भूगोल आदि सबलाई भुलेर।
पछिल्लो पाँच, दशक यता जुम्ला स्याउले परिचित भइरहेको छ। कुनै बेला गाउँ आयो... आयो भन्ने थियो। आज गाउँ आयो स्याउ आयो नारा घन्किरहेछ। (यहाँका बुढापाकाका अनुसार २०२४ साल आसपास तिर जुम्लामा स्याउका विरुवाहरू भित्रिएका हुन्।)
२०६३ सालमा जुम्ला सुर्खेत ट्रायाक रोड खुलेपछि मात्र यहाँका किसानहरूले स्याउ र ओखर लगाउन तिव्रता दिए।
मुस्ताङको सबै ठाउँमा स्याउ फल्दैन। तर जुम्लामा त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ स्याउ नफलोस्। त्यसैले आज स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्र हरेक वर्ष बढिरहेको छ। सुरूका दिनमा बजार वरिपरिमा सिमित उत्पादन हाल जिल्लाको सबै वडासम्म विस्तार भएको छ।
हाल जिल्लाका सबै ठाउँमा गरि जम्मा १४ हजार ८ सय स्याउ बगैचा छन् भने ती सबै बगैचामा कुल ४४ लाख ४० हजार बिरुवा लागइएका छन्।
यतिले ३३ सय हेक्टर जमिन ओगटेको छ। हाल ९ सय हेक्टरमा ५५ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भइरहेको छ। कृषि विकास कार्यालयले एक घर एक बगैचा निर्माणको लक्ष्य लिएको छ।
पाखो जमिनमा स्याउ लगाउने हो भने जुम्लामा १९ हजार हेक्टर जमिनमा स्याउ फलाउन सकिने सम्भावना छ।
हाल १५ हजार ७ सय हेक्टर जमिन खाली छ। अर्थात उत्पादनको व्यापक विस्तार र मनग्ये आम्दानीको अथाह सम्भावना छ।
(हेर्नुस जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्ला आ.व २०७४/०७५ को तथ्यांक)
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९ सय पचास हेक्टरमा ६ हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ।
१६ करोडको ताजा र पाङ्गारिक २३५० मेट्रिक टन स्याउ निर्यात गरेको रेकर्ड आ. व २०७३/०७४ ले सुरक्षित गरेको छ। यही हो जुम्ला आत्मनिर्भरताको प्रयास।
हरेक वर्ष उत्पादन भएको स्याउबाट किसानले कति आम्दानी गर्छन्? पुरा तथ्यांक छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा स्याउको योगदान कति छ? यो पनि एकिन छैन। उत्पादनको निश्चित बजार छैन।
किसानहरूमा स्याउसम्बन्धि पर्याप्त जानकारीको अभाव, रोग किरा व्यवस्थापन नहुनु, आवश्यक मात्रामा सिँचाइ तथा मलको उपलब्धता नहुनु, उत्पादनपश्चात सुरक्षा दिन नसक्नु, कृषि विज्ञको अभाव तथा फल टिप्दा सुरक्षित उपाय अवलम्बन नगर्नू, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि आदि कारणले उत्पादनमा आशातित उपलब्धि हाँशिल गर्न सकिएको छैन।
स्याउ नाशवान फल हो। यसमा ९० प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ। बजारमुखि उत्पादनका लागि व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किसानको बगैचादेखि बजारसम्म पुर्‍याउँदा विभिन्न किसिमले क्षति हुन्छ। यसरी हुने क्षति २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रहेको अध्ययनले बताएको छ।
स्याउमा हुने क्षति दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो हो-फिजियोलोजिकल क्षति। यसले श्वासप्रश्वास, ट्रान्सपिरेशन र स्याउ परिपक्व हुँदा उत्पादन हुने इथिलन हर्मोनमा असर गर्छ। यसको कारक स्याउभित्र हुने आन्तरिक तत्व हो।
यसलाई रोक्ने सजिलो उपाय फल टिप्ने बित्तिकै उचित तापक्रमको भण्डार गृहमा भण्डारण गर्ने वा त्यही गुणस्तरमा बजारसम्म पुर्‍याउने हो।
अर्को हो भौतिक क्षति । यो स्याउ टिप्दा, ग्रेडिङ गर्दा, प्याक गर्दा, ढुवानी गर्दा घाउ चोटपटक लागेर हुने गर्दछ।
फल टिप्दा परिपक्व अबधि पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्याउ आफैंमा यस्तो फल हो जुन रूखबाट टिपिसकेपछि मात्र पूर्ण रूपले पाक्छ। यसरी पाक्दा फलमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्ने, एसिडको मात्रा घट्ने र वास्नादार हुने गर्छ।
परिपक्क अवस्था पहिचान गर्ने भौतिक, रसायनिक, फिजियोलोजिकल, गणितीय र इलेक्ट्रोनिक गरि पाँच वटा बिधि छन्। यी मध्ये सबैभन्दा सजिलो बिधि भनेको भौतिक बिधि हो। यसले फलको रंग ६५ प्रतिशत बढी हुनपर्ने, बिउको रंग सेतो खैरोबाट कालो हुनुपर्ने तथा गुदिको रंग हरियोबाट पँहेलो हुनुपर्ने भन्छ। जुन सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ।
अर्को हो गणितीय बिधि। यो रमाइलो र सजिलो पनि छ। यसले हिसाब गर्न भन्छ। दिनगन्ति गर्न लगाउँछ। स्याउको जात अनुसार फूल फूलेको समयलाई ध्यानमा राखी फल टिप्न सुझाव दिन्छ।
रोयल डेलिसियस १२० देखि २५ दिन, रेड डेलिसियस १३४ देखि ३९ दिन र गेल्डेन डेलिसियस १४८ देखि ५४ दिनसम्ममा टिप्नुपर्ने हुन्छ।
फल टिप्दा हाँगाहरू नभाचिने, जोडले हाँगा नझट्कार्ने, हात नपुग्ने ठाउँमा भर्‍याङको प्रयोग गरि टिप्नुपर्ने हुन्छ। जस्ले गर्दा अर्को वर्ष पनि सजिलै स्याउ फलाउन सकिन्छ।
टिपिसकेको फललाई आकार र रंगको आधारमा: सुपर, ए, वि, सि र डि ग्रेड गरि छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ले गर्दा उपभोक्ताको मागलाई सजिलै पूर्ति गर्न सकिन्छ भने उचित मूल्य लिएर अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ।
प्याकेजिङ र लेबलिङको कारण ढुवानी गर्दा बाहिरी वातावरणबाट बचाउन तथा खरिदकर्ताहरूलाई सुविधा प्रदान गर्छ।
स्याउ किसानका दुश्मन हुन भुवादार लाही किरा। यिनीहरूको व्यवस्थापन किसानको लागि युद्व जित्नु बराबर हो। यिनको संक्रमणले बुटाहरू रोगाउँदै जाने, बढ्न नसक्ने, फल कमसल फल्ने र अन्तमा बिरूवा नै मरेर जाने सम्मको हुन्छ। जिल्लाका लगभग सबै बगैचामा यो समस्या देखिन्छ।
समयमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा ध्यान दिइएन भने कुनै दिन जुम्लामा चाइनिज, इन्डियन वा अमेरिकन स्याउ ठेलामा बेच्न राखेको प्रशस्तै भेटिने छ। जुम्लामा स्याउ फल्थ्यो भन्दा नयाँ पुस्ताले नपत्याउने स्थिति आउन सक्छ।
त्यसैले भुवादार लाही किराको व्यवस्थापनको लागि कोसेवाली लगाउने, बगैचाको वातावरण सँधै सफा राख्ने, बोडोमिक्स्चर आदि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै एफिलिनस मालि भन्ने परजीवी किराको प्रयोगबाट पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यो तरिका सामान्य किसानको पहुँचमा हुँदैन। यसका लागि सरकारी अनुदान र लगानी आवश्यक पर्छ।
२०७३ सालमा सरकारले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवम् आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपरजोन स्याउ सञ्चालन गर्‍यो।
यसले किसानहरूलाई कृषि उत्पादन सामग्रीहरू, प्राविधिक सहयोग, प्रयोगशाला सेवाहरू, कृषि औजार तथा उपकरण, साना सिँचाई पुर्वाधार र उत्पादनपरान्त कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारहरु मा अनुदान सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा साना सिँचाई, जलाधार निर्माण, सेलार स्टोर निर्माण, पावर टिलर र मिनिटेलर, प्रतिफलमा आधारित अनुदान गरी सुपरजोन कमाण्ड क्षेत्रमा झण्डै २ करोड ५५ लाख बराबर अनुदान सहयोग गरेको छ। (सुपरजोन कमाण्ड क्षेत्र भनेर चन्दननाथ नगरपालिका र तातोपानी गाउँपालिकालाई मानिएको छ।)
जुम्लामा स्याउ उत्पादन हुन थालेको निकै थोरै मात्र समय भए पनि विश्वमा यसको महिमा र उत्पादनको लामो इतिहास छ।
सबै फलफूलको राजा मानिने स्याउ इसा पूर्व ६ हजार पाँच सय वर्ष अघिदेखि अर्थात आजभन्दा झण्डै ८ हजार ५ सय वर्ष अघिदेखि उत्पादन भइरहेको छ। एसिया र युरोपमा एक हजार वर्ष अघिदेखि स्याउको उत्पादन हुँदै आएको देखिन्छ।
इसाई धर्म ग्रन्थ बाइबलमा पहिलो मानव एडम र इबले स्याउ खाएको प्रसंगलाई रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। इसाई धर्मावलम्बीहरू स्याउलाई पवित्र फलको रूपमा मान्ने गर्छन्। यद्यपि सबै धर्ममा फलफूललाई पवित्र मान्ने चलन छ।
अस्ट्रेलियामा स्याउको एउटा बुटाबाट वर्षमा चार पटकसम्म स्याउ फलाउन सकिन्छ। चीनले ठूलो मात्रामा स्याउ उत्पादन गरिरहेको छ। इटालियन फुजि जातको स्याउ अहिले जुम्लामा पनि उत्पादन भइरहेको छ। यसले लगाएको आठ माहिनामै फल दिन्छ। अमेरिका पनि स्याउमा उत्पादन र विकासमा राम्रो उपलब्धि हात पार्ने देश हो।
सबैभन्दा बढी मात्रमा स्याउ उत्पादन गर्ने देश चीन हो। सन् २०१४ मा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार संसारभर उत्पादन भएको ८४.६ मिलियन टन स्याउमा ४८ प्रतिशत योगदान चीनको देखिन्छ।
जुम्लामा वर्षमा एक पटकमात्र स्याउ उत्पादन हुन्छ। एक वर्ष गतिलो फलेको स्याउ अर्को वर्ष कम फल्नेगर्छ। किसानको स्याउले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन।
सबै दृष्टिले कम्तिमा पनि भदौ पहिलो सातादेखि दोस्रो सातामा स्याउ तयार हुन्छ। कृषि विकास कार्यालयले यस्तो खालको सूचना प्रशारण गर्ने गरेको भए पनि अघिल्लो वर्ष साउन बिसमै स्याउ टिपियो।
यो वर्ष पनि यति बेलादेखिनै स्याउ टिप्न थालेको फोटाहरु फेसबुकमा देखिन थालेको छन्। यतिवेला स्याउ टिप्दा स्याउमा हुने एसिड ग्लुकोजमा परिणत भैसकेको हुन्न। त्यसैले स्याउ अमिलो हुन्छ। परिणाम, बजारमा न्युन गुणस्तरको स्याउ पुग्छ।
नाफा खाने कमाउने उद्धेश्यले बिचौलियाले किसानलाई छिटो स्याउ टिप्न उक्साइरहेका छन्। यस्ले फेरि पनि किसानहरू मर्कामा पर्नेछन् भने बजारमा जुम्लि स्याउको ख्याति घट्नेछ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छैन।
स्याउ जति गर्मिमा लगियो त्यति यसमा हुने पानीको मात्रा कम हुँदै जान्छ र गुणस्तर पनि खस्कदै जान्छ। त्यसैले स्याउ ढुवानीको लागि कुलर कन्टेनर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जुम्लाबाट सडक पुगेको देशको जुनसुकै ठाउँमा पुग्न तीन चार दिन भन्दा बड्ता लाग्दैन। यति समयको लागि कुलर कन्टेनर सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अघिल्लो वर्ष जुम्लामा इटालियन फुजी जातको स्याउका विरुवाहरू ल्याउँदा कुलर कन्टेनरमा कोलकत्ता बन्दरगाह हुँदै जुम्लासम्म झण्डै तीन महिना लगाएर पुर्‍याइएको थियो। जुम्लाको स्याउ बजारसम्म पुर्‍याउन कुलर कन्टेनर सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सकारी अनुदानमा भयो भने सजिलो र सस्तो पर्न जान्छ।
नेपाली बजारमा हाल लगभग ८० प्रतिशत स्याउ, चीन, भारत र अमेरिकाको छ। जुन नेपालको कुनाकुनासम्म पुगेको छ र यहाँको भन्दा सस्तोमा पाइन्छ। यसरी ठूलो परिमाणमा भित्रिने स्याउ विस्थापन गर्न र आत्म निर्भर हुन हाल भएका स्याउले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि माटो सुहाउँदो नयाँ जातका रोगमुक्त र बढी उत्पादन दिने स्याउका विरुवाहरुको विकास गरिनुपर्छ।
खालि भएको र उत्पादन सम्भाव्य जमिनमा एकीकृत खेति प्रणाली अपनाउनुपर्छ। यसका लागि सरकारी खर्चमा जिनेटिक ईन्जिनियरहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। पछि बाहिरबाट आउने स्याउमा बढी कर लगाएर आफ्नो उत्पादनलाई सस्तोमा बजारसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। यसरी स्याउमा नेपाल सजिलै आत्मनिर्भर हुन सक्छ। जुम्लीहरूको जीवनस्तर बढ्छ। यो कामपनि सरकारी तवरबाट मात्रै सम्भव छ।
किसानको बगैचामा सिँचाइको सुविधा पुग्नु, अनुदानमा सामग्रीहरू पाउनु सकारात्मक कुरा हो तर यति हुँदैमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित हुन सकिदैन।
बाह्रौं र तेह्रौं योजनाले कृषि क्षेत्रबाट क्रमश ३.९ र ४.५६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा उपलब्धि क्रमश ३.४ र २.३ प्रतिशत मात्र हुन गयो। त्यसैले ठूलो उपलब्धि हाँशिल गर्न सरकारले कृषिमा आधारित ठूला स्केलका उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ। यसरी स्थापना हुने उद्योगको स्वामित्व, नियन्त्रण र रेखदेखको जिम्मा पनि सरकारकै हनुपर्छ।
सुपर, ए र बि ग्रेटका स्याउहरू बजारमा पुर्‍याउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भने बाँकी स्याउ उद्योगबाट नयाँ नयाँ परिकार बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। यसको जिम्मा पूर्ण रुपमा सरकारले नै लिनुपर्छ।
उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन र नयाँ बजार विस्तारले ठूलो मात्रामा उपलब्धि हाँशिल गर्न र सरकारी तवरबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ।
समग्रमा सरकारी भूमिका बढी हुनुपर्छ। तर सरकार आफ्नो भूमिकालाई सिसि क्यामरा जत्तिकै सिमित पार्न चाहन्छ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुलाई कौडिको मोलमा निजीकरण गरेका र खुला बजार अर्थतन्त्रबाट केही नेता र उनका आसेपासे लगानीकर्तालाई फाइदा पुर्‍याइरहेका वर्तमानसम्मका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनमा स्वामित्व र नियन्त्रण लिन सुझएमा पच्नेवाला छैन। तथापि जिम्मेवारी सरकारकै हो।
कर राजस्वबाट उठ्ने रकमभन्दा आफ्नै उत्पादनबाट सरकारी कोषमा बढी रकम जम्मा हुन्छ। यसबाट लगानीको क्षेत्र बढाउन सकिन्छ भने विकासको दायरा फराकिलो हुन्छ। कम्युनिस्ट सरकारले स्वभाविक रुपमा आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ। आम नागरिक सरकारबाट यहि आशा राख्छन्। त्यसैले सरकार जुम्लाको स्याउमा आफ्नो लगानी बढाँउ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २२, २०७५